Magaalada catarka ee Hindiya : Warbixin & Video - BBC News Somali
Wax ka badan 400 boqol oo sanno, illaa xiligii boqortooyadii Jahangir, magaalada Kannauj ee dalka Hindiya waxa ay caan ku ahayd soo saarista catarka laga sameeyo ubaxa .
Balse hadda waxa ay magaalada wajahaysaa hoos u dhac balaaran oo xagga wax soo saarka ah , sababtuna waxa ay tahay barfuumada laga sameeyo waxyaabaha kale ee kiimikada ah oo aad usoo badanaya, qadkana ka saaraya warshadihii macmalka ahaa ee ubaxa shiida.
Qofka taga magaaladan waa ay ku adagtahay in uu durba arko astaamihii ay mar caanka ku ahaan jirtey. Gaadiidka badan ee dariiqa maraya waxaa laga yaabaa in marar dhif ah aad aragtid kareeto waddada maraysa oo lagu raray ubax, taasi oo galaysa waddooyinka yaryar ee qadiimiga ah ee dhagaxa ka samaysan.
Lahaanshaha sawirka Derrick Evans
Image caption Warshadaha yaryar ee Catarka
Labaatan sanno ka hor waxa magaaladan ku yiilay illaa 700 oo warshadahan yaryar ee catarka lagu sameeyo, maantana waxa kaliya oo ku haray wax ka yar 100 warshadood.
Warshadahan ayaa soo saara catarka , iyaga oo ka sameeya ubaxyada noocyadooda kala duwan, iyaga oo isticmaalaya hab hore oo lagu shiidayo ubaxa, kadibna lagu kala miirayo miidda iyo qashirka.
Waxyaabaha gaarka ka dhigaya catarkan ayaa waxaa ka mid ah caraftooda saa'idka ah iyo waqtiga badan ee lagu bixiyo soo saarista.
In lasoo saaro hal kiilo oo catar ah waxaa loo baahanyahay afar tan oo ubax ah.
Aroortii hore ayaa ubaxyada laga soo guraa beeraha, kadibna waxaa loo diraa makiinadaha lagu shiido.
Waxaa kadib lagu shubayaa digsiyo waaweyn, waxaana lagu darayaa biyo yar oo qabow, waxaana hoosta looga shidayaa dab qaxaya oo laga shidey dogobyo alwaax ah .
Afar ama lix saacadood ayuu dabka saarnaanayaa, iyada oo uumi baxa ka baxa lagu keydinayo weelal kale oo marka dambe looga miiri doono tuubooyin ama dhuumo lagu rakibay weelasha.
Shaqadan waa mid adag oo dhib badan, haddii digsiyada ay dabka saarnaadaan in ka badan intii loogu talogalay, uumiga baxaya carabtiisa waxa uu isu rogayaa sidii qaac oo kale. Waa xirfad awoow ka awoow la iska dhaxlay.
Image caption Biyo qaboow ayaa lagu shubaa digsiga ama ashuunka
Samaynta catarka waa qaali, dad yar ayaana fahamsan muhiimadda ay leeyihiin, kuwa kasii yarna waa ay qiimeeyaan.
Mid ka mid ah sababaha qaaliga ka dhigaya wax soo saarka ayaa ah alwaaxyada lagu shido dabka oo qiimahoodu uu aad u kordhey.
Xaalufinta dhirta ayaa iyaduna dowladda Hindiya ku qasabtay in ay mamnuucdo jarista geedka alwaaxan laga jaro, taasi oo ka dhigtey mid aanan la heli karin.
Muna Lal iyo wiilasheeda waxa ay isticmaalaan gaaska caadiga si ay u kariyaan catarka, balse tani waxa ay dishaa carafta catarka, macaamiishana aad uma jecla maadaamaa ay aqooni jireen caraftii wanaagsanayd ee catarka marka alwaaxa lagu kariyo.
Boqorkii Jahangir oo noolaa intii u dhaxaysay 1569-1627-dii ayaa xusuus qorkiisa ku qorey in aysan jirin wax xagga carafta u dhigma catarkan, wuxuuna sheegey in xitaa uu ka ceeyriyoduulalka, ruuxdana dajiyo.
Image caption Boqorkii Jahangir aad ayuu u jeclaa catarkan
Waxaa jira nooc catarkan ka mid ah oo aad usii caraf badan, magaciisuna waa Ruh Gulab, halkii kiilo oo ka mid ah waxaa loo baahanyahay in lagu sameeyo 8 tan oo ubax ah.
Balse macaamiisha ugu badan ee catarka ka iibsata magaalada Kannauj ayaa ah dadka ka ganacsatada tubaakada la ruugo, waxaana lagu daraa tubaakada marka la samaynayo.
Hindiya banaankeeda suuqa ugu weyn ee loo iib geeyo catarka waa dunida Carabta ama Bariga Dhexe, halkaasi oo muddo fog laga tixgalin jirey catarka lagu kariyo digsiyada, waxaana jira dad badan oo qiimo ahaan goyn kara catarka.
Sannadkii 2014-kii warbixin lasoo saaray ayaa lagu sheegey in udugga la iibsaday dalka Sucuudi Carabiya uu gaaray $1.4 bilyan doolar, iyada oo lagu qiyaasay celcelis ahaan qof kasta oo Sucuudiyaan ah in uu isticmaalo $700 oo catar ah bil kasta.
Image caption Dukaan barfuumka lagu gado o Dubai ku yaala
"Waxa uu u carfayaa sidii adiga oo dhex socda beer dhan oo ubax ah" ayay tiri Xussah Al-Tamimi oo ah haweeney u dhalatay dalka Kuwait oo dhalinyaro ah, iyada oo ka sheekeyneysa carafta catarka Ruh Gulab.
Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee dadka muslimiinta ah u jecelyihiin catarada ayaa ah in laga sameeyey waxyaabo dabiici ah oo jirka la marsan karo, iyada oo aanan lagu darin waxyaabo aalkolo ama kiimiko ah.
Dhulka Gacanka Carabta qiimaha catarka waxa uu u kordhaa hadba sida uu u fac weynyahay, waxaana haddiyad ahaan loogu geeyaa dadka arooska ah, iyada oo la raaciyo cuud iyo dahab iyaga oo lagu rido sanduuq yar oo alwaax ka samaysan.
"Markii uu aabahay guursanayay hooyadey, waxa uu u safray dalka Hindiya si uu usoo gado catarka ugu qiimaha badan, barfuumkaas wali waa ay haysataa hooyadey, waxayna doonaysaa in ay u hadiyayso caruurteeda marka ay guursanayaan" ayay tiri Dalal Al San oo iyaduna u dhalatay dalka Kuwait.
Balse ragga xitaa waa ay marsadaan catarka, runtiina caado ahaan xiligii hore catarka ragga ayuunbaa aad u isticmaali jirey ka hor inta aysan dumarka bilaabin muddo dhow.
"Aabahay waa uu marsadaa catarka , wuxuuna mariyaa suulka iyo farta maruubsatada dhexdooda, si marka uu dadka salaamo ay carafta ugu harto gacanta qofka kale " ayay tiri Dalal.
Inkasta oo ganacsatada carbeed ay muddo dheer ka ganacsan jireen catarka iyo waxyaabaha kale, haddane markii lasoo gaaray 1900 ayuu kor u kacay ka ganacsigiisa dalka Kuwait.
Dukaankii ugu horeeyey ee catarka kaliya lagu iibiyo oo magaciisu yahay Catyab Al Marshuud ayaa waxaa furey Suleymaan Al Marshuud sannadkii 1925-tii, wuxuuna si joogto ah ugu safri jirey dalka Hindiya.
Suleeymaan wiilkiisa oo Waliid lagu magacaabo ayaa hadda dukaanka kala wada, wuxuuna wali ku xiranyahay dadka catarka kariya ee dalka Hindiya.
Waqtigan hadda la joogo dukaamada barfuumada lagu iibiyo ayaa suuqa buuxiyey, waxaana aad loo jecelyahay catarada laga keeno Turkiga iyo Bulgaria, balse catarka Ruh Gulab ayaa wali ah mid qiimeyn gaar ah loo hayo.
Image caption Magaalada Kannauj ee Hindiya
Halkii dhalo oo cabirkeedu dhanyahay 11.5kg waxaa lagu iibiyaa 200 Dinar oo u dhiganta $650 doolar, marka aad dukaankan Atyab Al Marshuud aad ka iibsanaysid.
Lama oga illaa inta magaalada Kannauj ay sii wadi karto in ay soo saarto catarkan Ruh Gulab.
"Jiilka hadda jira waxa ay xiiseeyaan barfuumada casriga ah, sidaasi darteed waa in aan la imaadaa fikrad cusub oo aan dalabkooda wax oga qaban karo" ayuu yiri Pushpraj Jain oo leh shirkad catarka soo saarta.
Inkasta oo uu wali digsiyadii wax ku kariyo, haddane waxa uu soo kordhiyey warshado sameeya barfuumka casriga ah xili magaalada Kannauj oo dhan laga dareemayo mustaqbalka mugdiga ah ee uu wajahayo catarka digsiyada lagu kariyo.
"Farqiga u dhaxeeya catarka iyo barfuumka casriga ah waa farqiga u dhaxeeya cuntada lagu kariyo korontada iyo tan dabka caadiga ah lagu kariyo" ayuu intaasi raaciyey.
Image caption Karinta catarka waa xirfad la kala dhaxlay
Muuqaal Sir laga duubay janankii isku dayay afgembiga Itoobiya
Sir laga duubay janankii isku dayay afgembiga Itoobiya
Muuqaal Kheyre iyo matalaadda khudbadaha madaxda adduunka
Kheyre iyo matalaadda khudbadaha madaxda adduunka
Muuqaal Abwaan Cabdi Dhoof oo ka sheekeeyay taariikhda calanka
Muuqaal Nin dadka ajaaniibta bara hidaha iyo dhaqanka Soomaalida
Muuqaal Kenya : Waxaan kala soocaynaa qaxootiga iyo dadka deegaanka
Muuqaal Soomaaliya oo heshiis la gashay shirkadaha shidaalka ee Shell iyo Exxon Mobil
Soomaaliya oo heshiis la gashay shirkadaha shidaalka ee Shell iyo Exxon Mobil